Masuuliyin Ka tirsan Somaliland oo Ku Xirnaa Xabsiga Garoowe oo la xukumay August 25, 2011 / | <<<GIRIYAADNEWS<<<<
Masuuliyin Ka tirsan Somaliland oo Ku Xirnaa Xabsiga Garoowe oo la xukumay August 25, 2011 /
giriyaadnews garoowe Maxkamada darajada koowaad ee Garoowe ayaa maanta la horkeenay ilaa 9-qof oo dhowaan Ciidamada Puntland kasoo qabteen aaga Tuulada Taleex ee gobolka Sool kuwa oo maamulka Somaliland u qaabilsanaa gobolka Sool.
Gudoonka maxkamada ayaa dhageystay dacwada usoo gudbiyey Xeer ilaaliyaha maxkamada oo la xirrirtay in ay kusoo gudbeen Tuulada Taleex oo ay sheegeen in ay ka tirsan tahay Puntland.
Gudoomiyaha Maxkamada Sheikh Cabdinuur Jaamac ayaa ku dhawaaqay xukunka ay muteysanayeen eedeysaneyaasha la horkeenay maxkamada oo isugu jirey masuuliyin iyo Ciidankii lala soo qabtay,waxaana maxkamada masuuliyinta ay ku xukuntey midkii 10-sano oo xarig ah halka Ciidankii lagu xukumey midkii 5-sano.
Maxkamada ayaa dhinaca kale ku dhawaaqday in gaadiidkii iyo hubkii ay wateen oo ay Ciidanku soo qabteen ay la wareegayso Dowladda Puntland.
Mid kamid ah eedeysaneyaasha ayay maxkamadu sii deysay kadib markii wax dambi ah lagu waayey laguna tilmaamay inuu ahaa qof shacab ah.
Taliyaha aaga Sool ee maamulka Somaliland oo isna kamid ahaa ragii lasoo qabtay ayaan kasoo hormuuqan maxkamada isla markaana weli lagu hayo xabsi.
« halkan kadaawo shir ay yeesheen dhalinyarada beel waynta gadabuursi ee reer borama oo lagaga hadlayay soo dhawaynta ugaaska gadabuursi imaatinkiisa borama dawo video Waa Maanso Uu Abwaan Budin Kaga Jawaabayo Maanso Uu Tiriyay Hadraawi Waxana Layidhaa Maansada Hadimo »